KDE 4.10.4 waxaa lagu heli karaa hagaajin iyo hagaajin kala duwan | Laga soo bilaabo Linux
Maanta KDE waxay sii deyneysaa nooca 4.0.1 ee goobaheeda shaqada, barnaamijyadeeda iyo barnaamijkeeda horumarinta. Isbeddeladani waxay raacaan taxanaha isbeddelada xasilinta bil kasta ee taxanaha 4.10.
KDE 4.10.4 waxay keeneysaa cilado badan oo cilladaha iyo cusboonaysiinta tarjumaadda ah. Si kale haddii loo dhigo, qaabkan ma arki doonno wax cusub, waxaa ku jira oo keliya hagaajinta cilladaha iyo cusbooneysiinta tarjumaadda.
Waxyaabaha la dayactiro waxaa ka mid ah kor u qaadista Suite-ka Maareynta Macluumaadka Shakhsiyeed (Kontact), maareeyaha faylka loo yaqaan 'Dolphin file', iyo kuwo kale. Isbeddelada waxay ku qoran yihiin raadraaca arrinta KDE.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » KDE 4.10.4 oo lagu heli karo hagaajin iyo hagaajin kala duwan
ok, ku cusbooneysii OpenSUSE
Si loo cusbooneysiiyo OpenSUSE Tumbleweed 😀
Dolphin-ka ku jira OpenSuse ima tusayo wixii ugu dambeeyay ee laga galo dhinaca bidix ee guddiga, sideen u hawlgeliyaa?
Gudaha OpenSUSE 12.3 waxaan haystaa KDE 4.10.2, sidee ayaan ugu cusbooneysiiyaa KDE 4.10.4? Caadi ahaan waxaan sameeyaa # cusbooneysiinta cusbooneysiinta && zypper ma ogi haddii taasi sax tahay, waxaan ku cusbaa furitaankaSUSE.
Ku jawaab ayosinho
haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso KDE SC 4.10.4 waa inaad ku dartaa KR410 repo http://en.opensuse.org/KDE_repositories#Upstream_release_aka._KR410_.28KDE_SC_4.10.29
waad raaci kartaa tusahan si aad ugu darto repo:
Iyo isku mid markii KDE SC 4.11 soo baxdo waad u cusbooneysiin kartaa si isku mid ah, adoo kudaraya KR411 repo (waqtigaas)
faalladaydii hore waa la waayey ...
guud ahaan, si aad u cusbooneysiiso, raac tilmaamahan: http://guiadelcamaleon.blogspot.com.es/2013/03/como-instalar-kde-4101-en-opensuse-123.html
waxaan ka raali galinayaa faallooyinkii saddexaad ee isku xigta, illaa aan u soo diro faallada ka hor kani waa kii la filayay inuu lumay uu soo muuqday.
Cadaab Windows Aero. Waxaan hubaa inaan tagayo KDE Oxygen.
HAHAHA, waxaan la joogayaa KDE Plastique
Oh by the way, isku day inaad ka soo dejiso mawduuca Glassify kde-eeg. Waa wax aad u fiican!
Wanaagsan !!!, wax walbana way ku fiican yihiin OpenSuse 12.3